Tuesday June 30, 2020 - 16:09:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kacdoonno rabshada wata ayaa ka bilaawday magaalada Addis Ababa ee caasimadda u ah dalka Itoobiya, kunanaan kun oo ruux ayaa isugusoo baxay waddooyinka waaweyn waxayna ku qeylinayeen erayo ka dhan ah nidaamka talada haya.
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in dad caraysan ay ku xoomeen xarumo dowladdu leedahay iyo guryo ay deganyihiin dadka kasoo jeeda qowmiyadda kirishtaanka ah ee Amxaarada.
Dadka kacdoonka dhigaya ayaa ka dhiidhinaya dil xalay magaalada Addis ababa loogu geystay nin fanaan ah oo kasoo jeedo qowmiyadda oromada kana mid ah dadka caanka ah ee laga yaqaan gobolka Oromia.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dadka dibad baxyada dhigaya ay dab qabadsiiyeen taallo loo dhisay boqorkii hore ee Itoobiya Mililik, ciidamada booliska ee rabshadaha ka hortaga ayaa waddooyinka lagu daadiyay balse awood uma yeelan in ay joojiyaan dibad baxyada.
Abiy Axmed R/wasaaraha xabashida Itoobiya ayaa war uu soo saaray ku sheegay in uu taczi qaran udirayo ehellada laga dilay fanaanka caanka ah,wuxuu isku dayayay in uu xaaladda dejiyo balse dibad baxayaasha ayaa ku gacan sayray oo wali sii wada kacdoonkooda rabshadaha wata.
Magaalada Addis Ababa bishan gudaheeda waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo lagu dilay siyaasiyiin iyo dad caan ka dhax ahaa qomwiyadaha Oromada iyo Amxaarada oo xurguf siyaasadeed ay ka dhaxaysay sanadadii dambe.
tan iyo markii uu Abiy Axmed noqday R/wasaaraha dowladda Xabashida Itoobiya sanaddii 2017 ayay isku dhacyada udhaxeeya qowmiyadaha kala duwan ee wadankaas dega sare usii kacayeen